Barnaamijka Hagaajinta Tayada - Caymiska Caafimaadka Maxaliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Barnaamijka Tayaynta Tayada
Waxaan had iyo jeer ka shaqeyneynaa sidii aan u bixin lahayn daryeel wanaagsan. Baro sida.
WAAN QIIMAYNAA RA'YIGAAGA
U fidinta daryeel wanaagsan iyo adeeg xubnaheena ah
Community Health Plan ee Washington (CHPW) Barnaamijka Hormarinta Tayada waxay cabireysaa sida ugu wanaagsan ee aan wax u qabanay si aan kuu siino daryeel iyo adeeg tayo sare leh oo macquul ah.
Waxaan la soconaa barnaamijyada caafimaadka ee kala duwan, waxaan ka warbixineynaa sida wanaagsan ee aan u shaqeyno, waxaanna raadineynaa qaabab aan ku horumarin karno.
Barnaamijkeena Horumarinta Tayada
Waxaan haynaa siyaabo badan oo kala duwan oo aan ku hubin karno inaad helayso daryeelka iyo adeegyada ugu fiican ee suurtogalka ah. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha aan sameyno:
Waxaan bixinaa isuduwidda daryeelka si ay kaaga caawiso inaad ilaaliso daaweynta kala duwan iyo ballamaha dhakhtarka.
Waxaan u adeegsanaa daryeelka isku dhafan ee isku-dhafan si aan kaaga caawino inaad hesho helitaanka adeegyo badan.
Bixiyeyaasha shabakadeena aan iska kaashanno midkeenna iyo annaga si aan u hubinno inaad heshaan daryeelka ugu fiican.
Waxaan kormeernaa adiga ammaanka.
We baaritaan markaad noo sheegto wax ka khaldan sida laguula dhaqmay.
Waxaan u fidinaa ilo kaa caawinaya inaad wax ka barato caafimaadkaaga iyo abaalgudyo qaadista tillaabooyinka si aad u caafimaadsatid.
We Warbixin khibradeena caafimaad iyo daryeel ee xubnaheena iyadoo la adeegsanayo Xogta Waxtarka leh ee Daryeelka Caafimaadka iyo Macluumaadka (HEDIS) iyo Qiimaynta Macaamilka ee Bixiyeyaasha Daryeelka Caafimaadka iyo Nidaamyada (CAHPS). Waad heli kartaa xogta waxqabadka halkan.
Waxaan hubinaa barnaamijyadeena iyo adeegyadeena la kulmo ama ka badato heerarka ka socota Guddiga Qaranka ee Hubinta Tayada (NCQA) ee Aqoonsiga Qorshaha Caafimaadka. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan ku saabsan 2022 Barnaamijka Hormarinta Tayada halkan.
We Xoogga saar ku saabsan sinnaanta caafimaadka iyo bixinta daryeelka dhaqan ahaan iyo luqad ahaan iyadoo laga jawaabayo adoo raacaya barnaamijkeena Adeegyada Ku Haboon Dhaqan ahaan iyo Luuqad ahaan (CLAS) iyo sii wadida Kala-duwanaanta Daryeelka Caafimaadka Dhaqamada Kala Duwan ee NCQA.
Barnaamijkeena Horumarinta Tayada iyo Adiga
Barnaamijka Horumarinta Tayada ee CHPW wuxuu ku saabsan yahay caafimaadkaaga iyo khibradaada, sidaa darteed waqti ka waqti, waxaan kula soo xiriiri doonaa emayl, fariin qoraal ah, ama telefoon si aan kuugu sheegno barnaamijyada ama adeegyada aan u maleyno inay ku caawin karaan, ka wada hadli doonaan adeegyada ka hortagga ama fayoqabka waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso, ama aad wax badan ka baranayso caafimaadkaaga iyo waayahaaga.
Haddii aad qabtid su'aal caafimaad ama walaac, waxaad wici kartaa Khadka Talo-siinta Kalkaaliyahaaga, 24 saacadood maalintii, toddobada maalmood usbuucii: 1-866-418-2920 (TTY Relay: Garaac 711).
Waxaan rabnaa inaan ku maqalno!
Faahfaahin naga sii adoo ka soo wacaya Adeegga Macaamiisha halkan 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711) ama dhammaystirka sahannada si aad ula wadaagto khibradahaaga.
Haddii aad ka walwalsan tahay tayada daryeelka aad heshay, fadlan noo sheeg.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 18, 2022